“Hazard wuxuu awoodiisa ku muujin doonaa Real Madrid” – Thibaut Courtois – Gool FM
“Hazard wuxuu awoodiisa ku muujin doonaa Real Madrid” – Thibaut Courtois
(Madrid) 15 Okt 2020. Goolhaayaha reer Belguim iyo kooxda Real Madrid ee Thibaut Courtois ayaa garab istaag weyn u muujiyay saaxiibkiis Eden Hazard, isagoo xaqiijiyay in xiddiga uu ku fiicnaan doono Los Blancos wakhtiyada soo socda.
Real Madrid ayaa la soo saxiixatay Eden Hazard xagaagii 2019, isagoo kaga soo biiray naadiga Chelsea, ku dhowaad qiimo dhan 100 milyan.
Laakiin ilaa iyo haatan, Eden Hazard ayaan sameynin bandhigiisii cajiibka ahaa tan iyo markii uu yimid Real Madrid, kaddib markii uu la kulmay dhaawacyo soo noqnoqday, intii lagu jiray xilli ciyaareedkii hore iyo xilli ciyaareedka haatan socda.
Sida laga soo xigtay Radio “Cadena SER” ee dalka Spain Thibaut Courtois ayaa yiri:
“Kusoo laabashada Hazard qaab ciyaareedkiisii lagu yaqiinay? Shaki igagama jiro taas, waan hubaa inaan arki doonno qaabka ugu wanaagsan ee Eden, wuxuu awoodiisa ku muujin doonaa kooxda Real Madrid”.
“Wuxuu leeyahay rabitaan ah inuu muujiyo taas, Si wanaagsan ayaan u arkaa waxaana rajeynayaa inuu dhawaan awood u yeelan doono inuu cadeeyo”.
”In yar ka hor dhaawiciisa, wuxuu ciyaaray dhawr kulan oo wanaagsan, laakiin waxa uu nasiib xun ku yeeshay in uu markale dhaawacmo, mana aheyn wax fudud in laga baxo dhaawacaas”.
“Laakiin bishaan, waxaan arkay isagoo si fiican u tababaranaya, waana hubaa inuu banaanka keeni doono awoodiisa, farxad badana siin doono kooxda”.
Si loo dhameystiro riyada Frank Lampard... weeraryahan caan ah oo diirada u saaran Chelsea xagaaga soo aadan
RASMI: Sancho & Fati oo hoggaaminaya liiska kama dambeysta ah ee 20-ka laacib oo ku tartami doona abaal-marinta Golden Boy 2020